box02blog: how to download rapidshare files with wget
how to download rapidshare files with wget
ကျနောှက ရုပ်ရှင်ကြိုက်တဲ့သူဖြစ်တာမို့ ရုပ်ရှင်တွေကို အင်တာနက်ကနေ download လုပ်ဖို့အတွက် အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်တဲ့နည်းကို ရှာပြီး သုံးနေခဲ့ပါတယ်။ ကျနောှက တစ်ခါတစ်လေ ရုပ်ရှင် ၁၅ ကား အကား ၂၀ လောက်ကို တစ်ခါတည်း download လုပ်တာဆိုတော့ ကြည့်ချင်တဲ့ရုပ်ရှင် rapidshare links တွေကို အရင်စုစည်းပြင်ဆင်ပါတယ်။ လင့်ခ်တွေအာလုံးပါတဲ့ text file တစ်ဖိုင်ကိုပြင်ဆင်ပါတယ်။ ဒီလိုပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာလဲ ကိုယ် download လုပ်ချမယ့် links တွေက အလုပ်လုပ်သေးလား သေနေပြီလားဆိုတာကိုပါ တစ်ခါတည်းစစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးမှ အလုပ်လုပ်တဲ့လင့်ခ်တွေကိုပဲ တစ်ခါတည်း စုစည်းပါတယ်။ အဲလိုလင့်ခ်တွေကို text file နဲ့ပြင်ဆင်ပြီးမှ wget နဲ့ တစ်ခါတည်း ဆွဲချတော့ပါပဲ။ ဘာမှထပ်လုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။Requirements:1) Internet connection2) Mozilla Firefox3) Firefox plugins: Greasemonkey, Copy Links4) Userscript: Rapidshare Links Checker5) Text Editor: gedit, notepad++ (or whatever)6) wget 7) Rapidshare Premium accountEnvironments Setup:Firefox မှာ အပေါှကလိုအပ်တဲ့ plugins တွေ install လုပ်ပါ။ Greasemonkey plugin ကို install လုပ်ပြီးတဲ့အခါ Rapidshare Links Checker userscript ကို install လုပ်ပါ။ ကိုယ့်စက်ထဲမှာ text editor နဲ့ wget ကိုရှိနေမယ်လို့ယူဆပါမယ်။ မရှိရင် install လုပ်ပေးထားမယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ့်စက်က Internet နဲ့ချိန်ဆက်ထားတယ်လို့လဲ ယူဆပါတယ်။Downloading:$ wget --auth-no-challenge --user=RS_USER_LOGIN --password=RS_PREMIUM_PASSWORD -i rs_links.txtဒီနေရာမှာ;RS_USER_LOGIN ဆိုတာက rapidshare premium user login name ပါ။RS_PREMIUM_PASSWORD နေရာမှာ rapidshare premium password ကိုအစားသွင်းပေးပါ။rs_links.txt ဆိုတာက rapidshare links တွေပဲ စုစည်းထားတဲ့ text file ပါ။Enjoy with it! :-)
Mad ComputeristSeptember 24, 2009 at 10:29 PMYou can use Internet Download Manager (Import from Text file) and site login to download the whole list from RS automatically.Try it. ;)ReplyDeleteMad ComputeristSeptember 24, 2009 at 10:39 PMYou can also do like that by Internet Download Manager in which you have to fill your RS login and password in Site Login and import the links from text file.Try it. ;)ReplyDeleteဘောက်တူးSeptember 24, 2009 at 11:34 PMoh yeah..! thanks, I will try it. :-)ReplyDeleteAdd commentLoad more...
how to get zawgyi keyboard on Xubuntu 9.04
going to cinema for G-FORCE 3D movie
how to get zawgyi keyboard on XFCE desktop
xboard and playing online chess
Dropbox Linux CLI into your system
Firefox3.5.* and desktop icon for Linux
using PuTTY to login Ubuntu via OpenSSH